Isidakamizwa esithi "Isofra" sibhekisela eqenjini lama-antibiotics aminoglycosides, anempahla ye-bactericidal futhi asetshenziselwa kakhulu ku-ENT-practice njengesicelo sama-topical.
Incazelo yesidakamizwa "Isofra"
Impendulo yeziguli ezithatha imithi ibonisa ukusebenza kwayo, okubangelwa ukuba khona kwamakhemikhali e-Framichetin, okusebenza ngokumelene nezifo ezihlukahlukene zokuphefumula (ipheshana eliphezulu lokuphefumula).
Ama-bacterium amaningi angama-Gram-positive noma ama-Gram-negative ochungechunge abangela izinkinga ezithathelwanayo zendlela yokuphefumula engenayo ane-hypersensitivity. Izinsiza ezisizayo zihlanganisa i-chloride ye-sodium, i- methyl parahydroxybenzoate, i-citric acid namanzi. Isidakamizwa sikhiqizwa ngesimo se-spray spray. Ezingqikithi zayo eziphelele, umuthi "uFramicetin"
Ukungafani nokuphathwa kwe-spray "Isofra"
Ukubuyekezwa kubonisa ukubamba iqhaza kwesidakamizwa emithini yokwelapha izifo ezihlukahlukene zemapheshana okuphefumula, okuyisimo esithathelwanayo. Isidakamizwa siphumelela ngokuphumelelayo i-rhinopharyngitis, sinusitis ne-rhinitis. Isetshenziswa njenge-prophylaxis ngemuva kokuhlinzwa okuhlinzekwayo. Ukungahambisani nokuqhathaniswa nakho akusekho, kubandakanya ukuzwela okwedlulele kwizinto ezisebenzayo. Izithibelo ekukhulelweni, iminyaka yobudala kanye ne-lactation azikho.
Ukudlula ngokweqile nomphumela ohlangothini we-spray "Isofra"
Ukubuyekezwa kweziguli ezisebenzise i-spray, bathi abazange bazizwe nemiphumela emibi. Kodwa imfundo iqukethe ulwazi mayelana nokubonakaliswa kwezilwane esikhumbeni ngesikhala sokubamba. Ukudlula ngokweqile ukungabikho kwezikhangiso ezivela emathunjini emathunjini namathumbu akungabazeki.
Imfundo kanye nezici zokusetshenziswa kokulungiselela "Isofra"
Ukubuyekezwa kubonisa ukusetshenziswa okulandelayo kwemithi. Iziguli ezidinga izidakamizwa ezilodwa ze-nostril ngayinye, okufanele zenziwe izikhathi eziyisithupha ngosuku. Izingane zinciphisa inani lezicelo ngesigamu. Ukwelashwa kwenziwa izinsuku eziyisikhombisa.
Ngesikhathi sesicelo, ibhodlela kufanele igcinwe endaweni eqondile. Uma kungekho ukuphuthuma emva kokusetshenziswa kwamasonto onke ngesidakamizwa, kufanele uxhumane nodokotela wakho ukuze ashintshe imithi yokwelapha.
Ukulungiselela kwe-Isofra: intengo nezibuyekezo
Izitatimende zesiguli mayelana nokusetshenziswa kwe-ejenti kuningi zilungile. Abaningi bakhuluma ngokuphumelela kwe-spray, ngokungafani nezinye izidakamizwa zamanzi, ikakhulukazi lezo ezisetshenziswe ngaphambilini. Lokhu kuyiqiniso, ngoba ezinye izidakamizwa zingase zingalungele ukwelashwa, futhi kwezinye izimo zemitholampilo, ezinye izidakamizwa zingase zibe umlutha.
Akuyona ihlukile futhi i-spray "Isofra", ongayithenga kuma-pharmacy. Kwezinye izimo, futhi kubangela umphumela wokulutha. Ngaphambi kokusebenzisa lesi sidakamizwa kunconywa ukuba uvakashele udokotela ozonquma izimpawu zesifo futhi anikeze imithi efanele yokwelapha.
Izindleko zemithi ebhodleleni lama-milliliters angu-15 yi-ruble ayi-170.
"Ovenkor": imiyalelo yokusetshenziswa. Izidakamizwa ezinciphisa i-Lipid
Ukulungiselela "i-Epigaline": imiyalo, indlela yokwenza isicelo, ukwakheka, izilinganiso, izibuyekezo